Banyere anyị - Dezhou Dongyu Plastic Packaging Co., Ltd.
N'ihe karịrị afọ 20 nke ọkachamara poly plastic, anyị nwere ihe ọmụma na ahụmịhe nke na-eme ka anyị bụrụ ndị na-ebubata akpa rọba nke ụlọ ọrụ.Anyị na-agba mbọ hụ na ngwaahịa akpa poly anyị na akpa rọba abụghị naanị na-egbo mkpa gị mana gafere ihe ị tụrụ anya ya.Dezhou Dongyu Plastic & Packaging Co., Ltd bụ ọkachamara n'ịmepụta ụdị akpa akpa akpa rọba niile.Site na akụrụngwa dị elu na otu ndị ọrụ ọkachamara na teknụzụ, ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-ejikọ ụlọ ọrụ na azụmaahịa.Ụlọ ọrụ ugbu a nwere ọkọlọtọ ogbako na ụlọ nkwakọba ihe na ebe nke 2,000 square mita na 50-100 ọrụ.Enwere igwe na-akụ ihe nkiri plastik 20, ihe karịrị igwe 30 na-aga n'ihu na-agbagharị, igwe mkpuchi na ịkpụcha na igwe obibi 10.Ike mmepụta kwa afọ ruru tọn 4000.Anyị tumadi na-emepụta dị iche iche nkọwa nke vest akpa, ewepụghị akpa, akpọrepu vest akpa, akpọrepu ewepụghị akpa, akpa akpa, achịcha, 20% ego mkpofu akpa, anụ ụlọ akpa akpa, disposable tablecloths, ziplock akpa, film na-apụta, wdg The isi ahịa. n'ihi na ngwaahịa ndị North America, South America, Europe na Africa.
Slogan / ọhụụ / mgbe-ahịa ọrụ
Okwu nke ụlọ ọrụ anyị bụ: "Iguzosi ike n'ezi ihe bụ ntọala, àgwà mbụ"Ụlọ ọrụ anyị eguzobewo usoro nlekota njirimara ngwaahịa ngwaahịa dị mma. Ndị ọrụ pụrụ iche ga-enyocha àgwà ngwaahịa. A na-ewere ngwaahịa niile na-adịghị mma dị ka ihe mkpofu. Mgbe ọ bụla ị nwetara ngwongwo n'ime ụbọchị 30, anyị ga-eme nletaghachi, nke a ga-eme ka mgbanwe dị mma na usoro ọzọ gị.
Ọhụụ ụlọ ọrụ anyị bụ ijere ndị ahịa ọ bụla ozi nke ọma wee nweta nnabata ndị ahịa n'ịdị mma na iguzosi ike n'ezi ihe.Site na ndị ahịa gaa na ezigbo ndị enyi.
Banyere ọrụ ire ere.Mgbe i nyechara ihe akaebe kwesịrị ntụkwasị obi.Anyị ga-akpakọrịta nkwụghachi ozugbo enwere ike.Adịghị emerụ mmasị gị.Na ịdekọ ma kparịta ụka.Iji gbochie nsogbu ịdịmma ngwaahịa ugboro ugboro.
Ka ị nye anyị ohere.
Anyị ga-eji omume bara uru gwa gị na anyị ziri ezi ịhọrọ.